5 Best Ịgba ígwè ụzọ ụkwụ Iji Njem Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best Ịgba ígwè ụzọ ụkwụ Iji Njem Na Europe
site Laura Thomas 27/08/2019
Train njem Austria, Train njem France, Train njem Germany, Train Travel Holland, Train njem Italy, Travel Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 01/02/2020)
Ma ọ na-a ụbọchị ole na ole na-agbalị chepụta gị bike Kwadobe ma ka na-ekpori sinik ịgba ígwè ụzọ ụkwụ, ma ọ bụ ihe The Epic 1,800km ride si Canterbury na Rome, anyị 5 Best Ịgba ígwè ụzọ ụkwụ Iji Njem Na Europe ga-akpali gị!
1. First na anyị ndepụta 5 Best Ịgba ígwè ụzọ ụkwụ Iji Njem Na Europe bụ: Passau, Germany Iji Vienna
Nke a na otu onye bụ bụghị maka hotara na mbụ bike gia onye ugha. N'ihi ubé ọzọ nwere ahụmahụ, ma ọ bụghị nnọọ Tour De France na-agba ígwè, Nke a bụ maka gị!
A otu izu mbụ okirikiri uzo, anyị ga na-akwado gị banye ụgbọ okporo ígwè n'elu German ókè-ala na Passau, a mara mma n'obodo ebe osimiri Inn, Danube na Ils zukoro. Dọwa anyịnya igwe si Matthias na Drasch bike Clinic na pedal anya tinyere okporo ụzọ free ụzọ n'akụkụ Danube.
Esterbauer ebipụta a ndu na English a classic ụzọ: map ndị magburu onwe (Ị na-agbali na-agba ịnyịnya nke ozo ahu ọgụgụ ezie. gbalịrị na. Short akụkọ; ọ kwụsịrị merụsịrị) The map ga-enye gị Atụmatụ maka ulo Ndepụta na ebe nke mmasị n'ụzọ, ka Melk na Austrian vine na mkpụrụ na-eto eto ebe. Fahrrad-Klinik nwere ndokwa na a hotel nke dị ná mpụga Vienna ebe ị na-ahapụ anyịnya igwe. Wepụta a ụbọchị ma ọ bụ ya mere na Vienna tupu akụta ndị ụgbọ okporo ígwè azụ Linz na-efe efe home.
2. Cycle Nsoro: Via Francigena, Italy
Maka geographically aka, a ga-adị gị 5 Best Ịgba ígwè ụzọ ụkwụ ka njem na Europe ndepụta. Nke a bụ ndị fọdụrụ n'ezinụlọ signposted okirikiri-aga Italy! The Via Francigena-agba site na Ukwu St Bernard Pass na ókè-ala na Switzerland ka St Peter nnukwu ụlọ ụka Senti na Rome.
Ozugbo a njem uka ụzọ, ọ bụ ihe karịrị otu puku afọ. The ụzọ na-ewe agba site na Tuscan Okirikiri ma n'oge gara aga ochie obodo dị ka San Gimignano. Ga-enye onwe gị a di na nwunye nke mmezi ụbọchị dị nnọọ ka foto akwụsị, mgbe ụfọdụ wine akatabi okop, na-enwe gị nnukwu n'ọnụ ụzọ n'ime Rome.
Florence na Rome Tickets
3. Danube Cycle Ụzọ
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na njem a na ezinụlọ a na-eme mgbe ahụ Danube Cycle Ụzọ bụ gị mma nzọ! Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị ọma mara na ọma gara bike pụrụ isiwo Europe. N'ihi ya, ọ bụ ihe ijuanya na ọ bụ otu n'ime 5 Best Ịgba ígwè ụzọ ụkwụ gaa na Europe.
Oputara na Danube River site isi ya na Germany ụzọ niile na Black Sea, ma ndị kasị ewu ewu gbatia nke nzọ bụ 190 mile (306 km) òkè n'etiti sinik German obodo nke Passau na Vienna, Austria. Fọrọ nke nta kpamkpam ụgbọ ala free na dịtụ ewepụghị, this path—which crisscrosses the border between Germany and Austria throughout much of the ride—is perfect for cyclists of any age and ability.
mt bụ nnọọ ike depụta nanị otu okirikiri ụzọ na guzo dị ka ndị kacha mma na Holland. N'ezie, anyị 5 Best Ịgba ígwè ụzọ ụkwụ gaa na Europe ndepụta nwere ike iso nke dị nnọọ Holland ụzọ ụkwụ! Nke a bụ a na obodo na ndị dị otú ahụ a mma ịgba ígwè akụrụngwa na ị na-na n'ihi na a na-emeso n'ebe ọ bụla ị okirikiri! Ịgbaso nkwụsị netwọk nke signposted ụzọ gasị, agafe tinyere 32,000 km nke okirikiri ụzọ bụ ọṅụ ewepụghị na obere anya n'etiti ọwọrọiso ebe.
Ma ị na-achọ ịchọpụta ihe ndị udo coastline na mara mma ọdụ ụgbọ mmiri obodo nta nke Holland si North Sea n'ụsọ oké osimiri, mba yi bọlbụ na-eto eto ala ma ọ bụ ụzọ gasị gburugburu vibrant isi obodo Amsterdam, ị ga-ahụ okirikiri ụzọ na embody na ihe niile dị oké banyere n'ọrụ ịgba ígwè na a leisurely ijeụkwụ.
5. The Cycle Nsoro Iji Paris Site Dieppe (ma ọ bụ London)
Ọ nwere ike ịbụ a anya n'ihi na ụfọdụ (Bụ maka m! akpa ọchị!) ma 127 miles from Dieppe to Paris provides a beautiful few days’ ịgba ígwè! The kasị ama okirikiri uzo bụ Avenue Verte, ma ụzọ nke kacha mma e sụrụ ụzọ site Donald Hirsch.
The n'oge kilomita nke ụzọ meander site obere French obodo nta, n'elu Rolling njem na gara aga ubi nke ọka wit na ọka. Gbalịa ka ị ghara ime wine akatabi okop kwa anya na njem bụ ezie na! The ụzọ dị jụụ na mma-ezie, na e nwere ndị dị nnọọ ezu ugwu nta na-edebe ya na-akpali ma na-agwụ ike. Donald si website dere njikọ okirikiri friendly ulo.
Dị ka ị nso Paris, n'adịghị Avenue Verte, nke a ụzọ na-ewe gị site na a usoro nke eze ịchụ nta ọhịa izere okporo ụzọ. Mgbe 120 kilomita nke obodo nta, ubi, na ịchụ nta ọhịa, na i tinye Parc St Cloud. Ọ bụ ihe ebe ọhịa dị mgbe Versailles, okporo ụzọ free, ogologo na ogologo, na-n'ókè site ogologo osisi. mgbe, ị na-ahụ na okporo ụzọ ga-emepe ka a n'ezigbo ebe, isi-iyi, na ihe gabiga.
Donald-esi na-ewe gị ekpe, ya mere na ị dịghị mgbe na-ahụ ihe bụ na njedebe nke ụzọ. Ma, ọ bụ ọnụ ahịa jiri ịnyịnya ígwè na ichoputa. Ị na-ahụ onwe gị na a n'elu ugwu, na ihe nile nke Paris setịrị n'ihu gị. Ọ ga-ahapụ gị nkwusi nku ume si na-ele, abụghị exertion.
Njikere na-esi gị pedal na ma họrọ otu n'ime 5 Best Ịgba ígwè ụzọ ụkwụ Iji Njem Na Europe? Great! All ebe ndị a nwere ike ruru ụgbọ okporo ígwè na-enyemaka nke Save A Train n'ezie! N'ihi ya, malite atụmatụ na-amalite ịgba ígwè!
Do you want to embed our blog post “5 Best Cycling Trails To Travel In Europe” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/5-best-cycling-trails-europe/– (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro).
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / zh-CN na / de ma ọ bụ / ja na ndị ọzọ asụsụ.
#ịgba ígwè #pedal Bike bikefriendly familytrip roadtrip
Train njem France, Train njem Germany, Train njem Italy, Train njem Scotland, Train njem Switzerland
Train njem Austria, Train njem Germany, Train njem Italy, Train njem Spain, Travel Europe